ကလေးဆိုတော့ သူထင်ရာကို ပြောချလိုက်တာဖြစ်မှာပါ – Tameelay
ကလေးဆိုတော့ သူထင်ရာကို ပြောချလိုက်တာဖြစ်မှာပါ
ရိုင်းပြတဲ့ ဆဲနည်းမျိုးစုံနဲ့ ဆဲနေတယ်…
အဆဲခံရသူက ပြန်မဆဲပဲ ပြုံးနေတယ်…
ဒါကို ၅ နှစ်သားကလေးက မြင်တယ်…
“ဦးဦး… ဟိုလူကြီးက ဦးဦးကို တအားဆဲနေတာ
“သူဆဲသလို ကျွန်တော်တောင် အကုန်ဆဲတတ်တယ်”
“အေးကွ ငါ့တူ… သူဆဲသလို ငါ့တူတို့လို ၅ နှစ်သား အရွယ်တောင် ဆဲတတ်လို့ ဦးဦးက ပြန်မဆဲတာပဲ”
“အော် သိပီသိပီ ဖေဖေနဲ့မေမေက ပြောဖူးတယ် ဆဲရင်ငရဲကြီးတတ်တယ်တဲ့…”
“ဦးဦးက ငရဲကြီးမှာ ကြောက်လို့ ပြန်မဆဲတာမို့လား”
“ကျွန်တော်လည်း ဖေဖေနဲ့မေမေက မဆဲရဘူး ဆဲရင်ငရဲကြီးတတ်တယ်လို့ အမြဲဆုံးမတယ်ဗျ အာ့ကြောင့် ကျွန်တော်လည်း ဘယ်တော့မှ မဆဲဘူးဗျ…”
“ဟေ… ဟုတ်လား ဦးဦးလည်း ဦးဦးရဲ့ ဖေဖေနဲ့မေမေက သားတို့အရွယ်ကတည်းက အဲ့လို ဆုံးမခဲ့လို့လေ သားရဲ့”
“အင်းးးးး ဒါဆို စောစောက ဦးဦးကို ဆဲနေတဲ့ ဟိုလူကြီးရဲ့ အဖေနဲ့အမေက ဆဲရင်ငရဲကြီးတတ်တယ်လို့ သူ့ကို မဆုံးမခဲ့လို့လား မသိဘူးနော် ဦးဦး”
Thein Than Win ( ထိန်ကန် )
ကလေးဆိုတော့ သူထငျရာကို ပွောခလြိုကျတာဖွဈမှာပါ
ရိုငျးပွတဲ့ ဆဲနညျးမြိုးစုံနဲ့ ဆဲနတေယျ…
အဆဲခံရသူက ပွနျမဆဲပဲ ပွုံးနတေယျ…
ဒါကို ၅ နှဈသားကလေးက မွငျတယျ…
“ဦးဦး… ဟိုလူကွီးက ဦးဦးကို တအားဆဲနတော
“သူဆဲသလို ကြှနျတျောတောငျ အကုနျဆဲတတျတယျ”
“အေးကှ ငါ့တူ… သူဆဲသလို ငါ့တူတို့လို ၅ နှဈသား အရှယျတောငျ ဆဲတတျလို့ ဦးဦးက ပွနျမဆဲတာပဲ”
“အျော သိပီသိပီ ဖဖေနေဲ့မမေကေ ပွောဖူးတယျ ဆဲရငျငရဲကွီးတတျတယျတဲ့…”
“ဦးဦးက ငရဲကွီးမှာ ကွောကျလို့ ပွနျမဆဲတာမို့လား”
“ကြှနျတျောလညျး ဖဖေနေဲ့မမေကေ မဆဲရဘူး ဆဲရငျငရဲကွီးတတျတယျလို့ အမွဲဆုံးမတယျဗြ အာ့ကွောငျ့ ကြှနျတျောလညျး ဘယျတော့မှ မဆဲဘူးဗြ…”
“ဟေ… ဟုတျလား ဦးဦးလညျး ဦးဦးရဲ့ ဖဖေနေဲ့မမေကေ သားတို့အရှယျကတညျးက အဲ့လို ဆုံးမခဲ့လို့လေ သားရဲ့”
“အငျးးးးး ဒါဆို စောစောက ဦးဦးကို ဆဲနတေဲ့ ဟိုလူကွီးရဲ့ အဖနေဲ့အမကေ ဆဲရငျငရဲကွီးတတျတယျလို့ သူ့ကို မဆုံးမခဲ့လို့လား မသိဘူးနျော ဦးဦး”
Thein Than Win ( ထိနျကနျ )
ဆရာဝန်တောင် အံ့သြသွားရတဲ့ အရူးတစ်ယောက် ရေးတဲ့ စာအုပ် …!
အရူးတစ်ယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာ စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုင်ထားတာတွေ့တော့ စိတ်ကျန်းမာရေးဒေါက်တာက မေးတယ်။ “လက်ထဲမှာ ဘာကိုင်ထားတာလဲကိုယ့်လူ” အရူးကပြောတယ် “ဒါဆရာ့အတွက်ယူလာတာဗျ စာမျက်နာ၅၀၀ပါတဲ့📝 ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာအုပ်ပါ📔ဆရာ” 👷ဒေါက်တာ။ ။ “ဟိုက်ရှ်… စာမျက်နာ ၅၀၀တောင်မှ ဘာတွေရေးထားတာလဲကွ”??? 👷အရူး။ ။ “စာမျက်နာအစမှာ ဘုရင်တစ်ပါးက မြင်းစီးပြီးတောအုပ်ထဲကိုထွက်သွားပါတယ် 🏇 နောက်ဆုံးစာမျက်နာမှာတော့ ဘုရင်ဟာတောထဲကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်လို့ ရေးထားပါတယ်” …
အခု ဘယ်​က​နေ လာပြိုင်​တာလဲဗျ ဂစ်​တာကြွက်​​ကြောက်​က​နေ လာပြိုင်​တာပါ ဘာနားကမြို့လဲဗျ ဂစ်​တာကြွက်​​ကြောက်​ဆိုတာ တစ်​ခါမှ မကြားဖူး​သေးဘူး” ဒီလိုပါ။ ဂစ်​တာက မတီးဘူးလား တီးတယ်​ ကြွက်​​ကြောက်​တာက ​ကြောင်​ တီး​ကြောင်​​တော့ ဪ သိပြီ ​တောင်​ကြီး ပြွန်​တန်​ဆာကပါခင်​ဗျ လခွမ်း ဘာမှလည်းမဆိုင်​ဘူး။ရှိ​စေ​တော့ ဘာအလုပ်​လုပ်​လဲ ​မြောင်းကြီး police …
အိမ်ထောင် သုံးခါကျဖူးတဲ့ အမျုိးသမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်… သူဟာ ခုချိန်ထိ အပျိုစင်ဘဝမှာပဲ ရှိသေးတယ်တဲ့။ ထူးဆန်းနေတာပေ့ါ…. ဒါနဲ့ သတင်းထောက်တစ်ယောက်က သွားပြီး အင်တာဗျူးတယ်… …. “အမကြီးရယ်…. အိမ်ထောင် သုံးခါကျတာတောင် အပျိုစင်ပဲဆိုတော့ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတာ သိပါရစေ” “ဒီလိုပါ… ပထမယူတဲ့ အမျိုးသားက သွေးတိုးရောဂါရှိတယ်၊ မင်္ဂလာဦင်္းညမှာ …